थपिएको निषे`धाज्ञा पहिला जस्तो नहुने, थप कडा हुने ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Lockdown News/थपिएको निषे`धाज्ञा पहिला जस्तो नहुने, थप कडा हुने !
काठमाडौं – काठमाडौं उपत्यकामा भदौ १७ गते राति १२ बजे सम्मका लागि नि`षेधाज्ञाको समय बढाइएको छ । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा प्रकाशित छ।
काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बुधबार बसेको संयुक्त बैठकले निषेधाज्ञाको समय एक साता बढाउने निर्णय गरेको हो । यसअघि भदौ ३ गते लागँ निषेधाज्ञा बुधबार राति १२ बजे सकिने भएकोले फेरि एक साता थप गरिएको हो ।
‘काठमाडौंमा एक साताका लागि अहिलेको भन्दा कडा`इसाथ निषे`धाज्ञाको समय बढाइएको छ’, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले भन्नुभयो– ‘अत्यावश्यक सेवा तथा वस्तुबाहेक पहिलेको भन्दा कडा तरिकाले निषेधाज्ञा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको छ ।’
संक्रा`मक रोग ऐन–२०२० को दफा २ र स्थानीय प्रशासन ऐन–०२८ को दफा ६ (३) अनुसार जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णय अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निषेधा`ज्ञा जारी गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधि`कारीहरुले गृहमन्त्रालय सँंग अन्तिम छलफल गरेपछि मात्र निषे`धाज्ञा बढाउने निर्णय गरेको हो ।
निषेधाज्ञा बढाउने विषयमा मंगलबार राति सम्म ती`नवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु गृहमन्त्रालयमा छलफलमा सहभागी भएका थिए। यसअघि मंगलबार दिउँसो तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित, कोभिड–१९ क्राइसिस म्याने`जमेन्ट सेन्टर (डीसीसी`एमसी) र काठमाडौं उपत्यकाका मेयरहरु`बीच भएको छलफलले पनि निषे`धाज्ञा बढाउन सुझाव दिएका थिए ।
सोमबार बसेको उपत्यका नग`रपालिका फोरमको बैठकले पनि सं`क्रमण बढेको निष्कर्ष निकाल्दै १५ भदौसम्म निषेधाज्ञा लम्ब्या`उन प्रशा`सनलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। ‘सबै पक्षबाट निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिनुपर्ने राय आएपछि हामीले समय थप्यौं ।’ –दाहालले भन्नुभयो ।
थप गरिएको निषे`धाज्ञा अवधिमा आइसोलेसन सेन्टर बढाउने, क`क्ट ट्रेसिङ र टेस्टको दायरा बढाउने पनि स्थानीय तहले भनेको छ । एक साता लामो निषे`धाज्ञापछि उपत्यकामा कोरोना भाइरस संक्रमणको ‘चेन ब्रेक’ भएको उपत्यकाका तीनै जिल्लाका प्रजिअले निष्कर्ष निकालेका छन् ।
भोलि देखि १० दिनका लागि कडा रुपमा कर्फ्यु लगाउने निर्णय